CIN Khabar २४ प्रधानमन्त्री फेरिए तर मेलम्ची आएन
२४ प्रधानमन्त्री फेरिए तर मेलम्ची आएन चार अर्ब अनुमान गरिएको परियोजना २७ अर्ब खर्च हुँदा पनि सम्पन्न भएन (अडियोसहित)
केशव भुल शुक्रबार, भदौ २७, २०७६, ०१:५१:००
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कारण आफूहरु पीडित भएको भन्दै आन्दालेनमा उत्रिएका मजदुर । तस्बिर : सागर खड्का ।
काठमाडौं । काठमाडौँमा दैनिक १७ करोड लिटर पानी ल्याउने उद्देश्यसहित २१ वर्षअघि सुरु गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको १० प्रतिशत काम बाँकी छ ।
एक वर्षअघि सुरूङ खन्ने काम पूरा भए पनि गत पुुसमा ठेकेदार कम्पनी सीएमसीसँगको ठेक्का रद्ध भयो । कहिले ठेकेदार त कहिले स्थानीयको अवरोध झेल्दै आएको मेलम्ची कहिले पूरा हुन्छ ? अझै टुङ्गो छैन ।
खानेपानी मन्त्रीमा बिना मगर नियुक्त हुनेबित्तिकै आफ्नो पहिलो प्राथमिकता मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम पूरा गर्नु रहेको बताउनुभएको थियो ।
मन्त्रीमा उहाँको नियुक्ति भएको करिब १० महिनामा इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीसँगको ठेक्का रद्द भयो । त्यसको करिब ६ महिनापछि नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनौट भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका सूचना अधिकारी राजेन्द्रराज पन्त बताउनुहुन्छ ।
पन्तले भन्नुभयो, ‘सीएमसीले आन्तरिक समस्याका कारण साइड छोडेर गइसकेपछि ठेक्का रद्द भयो र हामीले तुरुन्त बाँकी रहेको कामहरु सम्पन्न गर्नलाई नयाँ खरिद प्रक्रिया सुरु ग¥यौं । यसका लागि नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट समेत निर्णय भएको हो । त्यही अनुसार काम अघि बढिरहेको छ । ’
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यसैवर्ष मेलम्चीको काम सक्ने भनेको छ । तर मेलम्ची पीडित मजदुर र आपूर्तिकर्ताहरू एक सातादेखि आन्दोलनमा छन् ।
खानेपानी मन्त्रालय भन्छ, उनीहरूको माग पूरा गर्नका लागि प्राविधिक समिति गठन गरी काम सुरु भएको छ ।
समितिका संयोजक, खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रबहादुर केसी आन्दोलनबाट समस्याको समाधान नहुने भएकाले वार्ताबाटै पीडित पक्षको माग संवोधनको बाटो खोजिने बताउनुहुन्छ ।
पीडित मजदुरहरुको समस्या समाधान गरेर काम अघि बढाउन आफूहरुले निर्देशन पाइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
२०५५ सालमा निर्माण सुरु भए यता नेपालमा २४ जना प्रधानमन्त्री फेरिए । हरेक सरकारको प्रतिवद्धतामा पर्ने तर व्यवहारमा ढिलाइ भइरहने समस्या अझैँ कतिन्जेल चल्ला ?
मेलम्ची परियोजनाको विज्ञ भएर काम गरी सक्नुभएका बदनलाल न्यायोच्याई तदारुकताका साथ काम गरे धेरै समय नलाग्ने बताउनुहुन्छ । एउटा समूहले नसके काम गर्न सक्ने समूहलाई दिनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
यस्तै अवस्था रहे मेलम्चीको पानी कहिले काठमाडौैं आउँछ त्यो भन्न नसकिने उहाँको भनाइ छ ।
सुरुमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना रेलवे व्युरो कम्पनीलाई ठेक्का दिदा चार अर्ब २८ करोड लागत अनुमान गरिएको थियो ।
सन् २०१३ मै निर्माण सकिनुपर्ने भए पनि पटक पटकको म्याद थपसँगै अहिलेसम्म करिव २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदा पनि काम सकिएको छैन ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ २७, २०७६, ०१:५१:००